ကမ္ဘာပ်ါက အထူးဆန်းဆုံးသော အလုပ် ၉ခု အကြောင်း | Buzzy
ကမ္ဘာပ်ါက အထူးဆန်းဆုံးသော အလုပ် ၉ခု အကြောင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ. အလုပ်တွေဟာ ဘာမှစိတ်ဝင်စားဖို့ မကောင်းရင် များမကြာမှီမှာပဲ အလုပ်လုပ်ရာမှာ စိတ်မဝင်စားတော့ပဲ ပျင်းရိငြီးငွေ့စွာနဲ့ စက်ရုပ်တွေလို ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ။ ဒီထူးဆန်းတဲ့ အလုပ် ၉ ခုကတော့.....
Bed warmers အလုပ်အား ဟိုတယ်တွေမှာ ဟိုတယ်ခန်းထဲက အိပ်ယာကို တည်းခိုမယ့် ဧည့်သည်မလာခင် နွေးထွေးအောင် ပြုလုပ်ပေးရတဲ့ ဝန်ထမ်းမျိုး ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါမှသာ တည်းခိုမယ့် ဧည့်သည်လာတဲ့အခါ သူတို့အိပ်ယာဟာ နွေးထွေးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီအလုပ်ဟာ များစွာသော လူတွေအတွက်တော့ အလုပ်အကိုင်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် ။ professional sleeper ဆိုတဲ့ ဒီအလုပ်ဟာ အိပ်ယာဝင် အသုံးအဆောင်တွေ ရောင်းချတဲ့ ကုမဏီတစ်ခုက ကမ်းလှမ်းတဲ့ အလုပ်ပါ ၊ သူတို့ ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုပြီး သက်သောင့်သက်သာ အိပ်ပျော်ကြောင်း ကြေငြာဖန်တီးရာမှာ အသုံးပြုဖို့ပါ။
3. Professional Apologizer
ဒီ ပရောဖက်ရှင်နယ်အလုပ်ဟာ ဂျပန်မှာပဲတွေ့ရမယ့် အလုပ်မျိုးပါ ၊ အချို.လူတွေက သူတို့ရဲ. စိတ်ဆိုးနေတဲ့ အဖော်ကို တောင်းပန်ဖို့အတွက် ငှားရမ်းအသုံးပြုပါတယ်။
4. Professional Elephant Dresser
ဒီအလုပ်ဟာ အဓိကအားဖြင့် သိရိလင်္ကာမှာ ရှိပါတယ် ၊ အချို.သော ပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာ ဆင်တွေကို အဝတ်အစားဆင်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ ဆင်တွေကို အဝတ်အစား ဆင်ယင်ပေးဖို့ လူတစ်ချို.ကို ငှားရမ်းရပါတယ် ၊ အထိုက်အလျှောက်တော့ အန္တရာယ်များတဲ့ အလုပ်ပါ။
5. Ash Portrait Artist
အချို.သော လူတွေဟာ သူတို့ချစ်ခင်နှစ်သက်သူရဲ. အရိုးပြာနဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှု ပြုလုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတက်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ဟာ ash portrait artist တွေဆီ သွားရပါတယ်။
ဘာကြောင့်မို့ ငှက်ကုလားအုတ်တွေကို ထိန်းကျောင်းပေးမယ့် လူလိုတာလည်းဆိုတာကို မသိရပေမယ့် ဒီအလုပ်လုပ်ကိုင်သူတွေ အမှန်ပဲ ရှိနေပါတယ်။
7. Duck Master
အချို.သော ဟိုတယ်တွေဟာ ဘဲတွေကို ထိန်းကျောင်းပေးဖို့ လူငှားရမ်းထားတက်ပါတယ် ။ ဘဲတွေကို ဟိုတယ်ကြမ်းပြင်တွေမှာ လျှောက်သွားစေပြီး ဧည့်သည်တွေက တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
8. Chicken Sexer
ဒီအလုပ်ကတော့ နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့ ထူးဆန်းနေမှာပါ ၊ ဒီအလုပ်လုပ်ကိုင်သူတွေဟာ ကြက်ငယ်လေးတွေကို ဘယ်ဟာက အထီး ဘယ်ဟာက အမဆိုတာကို ခွဲခြမ်းပေးရပါတယ်။
ဒီအလုပ်ကတော့ အခြားအလုပ်တွေထက်စာရင် သင့်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်မှာ သေချာပါတယ် ။ ဒီအလုပ်ကို များသောအားဖြင့် ဂျပန်မှာ တွေ့ရပါတယ် ။ အထီးကျန်ဆန်သူတွေဟာ snuggle cafe တွေကို သွားပြီး တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ. ပွေ့ဖက်ထားခြင်းကို ခံနိုင်ပါတယ်။